La-talinta Kala-doorashada Ilmo-soo-rididda - tixgelinta ilmo iska soo ridid ​​iyo in kale
Raadso la-talinta xulashooyinka ilmo iska soo rididda khibrad leh si ay kaaga caawiso go'aan gaaristaada.
Miyaad tixgelinaysaa ilmo iska soo ridid ​​laakiin waxaad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah? Waxaan ku bixinaa la-talin kala-doorasho ah rugtayada caafimaadka si ay kaaga caawiso inaad qiimeyso dhammaan xulashooyinka suurtagalka ah si aad u gaarto go'aanka ugu fiican naftaada.
Marka lagu daro la-talinta xulashooyinka ilmo iska soo rididda, waxaa jira agabyo kale oo waaweyn oo kaa caawin kara go'aan gaaristaada.
The Buugga Shaqada ee Xulashada Uurka waa qalab weyn oo kaa caawinaya inaad uga gudubto habka go'aan qaadashadaada. Waxaan u adeegsanaa kheyraadkan inta badan inta lagu jiro kal-fadhiyada rugta caafimaadka.
Laga soo bilaabo Ikhtiyaariyada Uurka iyo Go’aan Qaadashada: “Haddii aadan hubin go’aanka aad ka qaadanayso uurkaaga, qaybtani waxay kaa caawin kartaa inaad kala saarto dareenkaaga. Fikradaha iyo talo soo jeedinta qaybtan looma jeedin inay kugu dhiirigeliyaan inaad go'aan gaar ah ka gaarto uurkaaga; halkii, waxaa loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad cadeyso fikradahaaga iyo dareenkaaga ku saabsan uurkaaga iyo inaad gaarto go'aanka adiga kugu habboon Fikradaha iyo talooyinka halkan lagu soo bandhigay waxay ku saleysan yihiin waayo-aragnimada la-talinta kumanaan haween ah oo ay soo food saartay uur aan la filayn.
Iskusoo wada duuboo, garwaaqso in si kasta oo aad doorato aad u doorato Waxaad Tahay Haweeney Wanaagsan [pdf]. Kheyraadkaani wuxuu aqoonsan yahay in uurku had iyo jeer ku lug yeesho xulashooyin adag, annaguna haddaan nahay FCHC waxaan ognahay inaad mas'uul ka tihiin oo aad caqli ku filan oo aad ku gaari kartaan xulashooyinkaas.
Qeybaha laga soo qaatay websaydhka Xiriirka Ilmo-iska-soo-ridka https://prochoice.org/scotus-allows-fake-womens-health-centers-continue/ )
Xarumaha Uurka Dhibaatooyinka (CPCs)